Ukwelashwa kwezinwele ku-salon
Uma izinwele zibuthakathaka, amandla alahlekile kanye nomthamo, futhi phezu kwekhefu, khona-ke futhi kukhona izintambo eziphelele - ngaphandle kosizo lochwepheshe olungenakukwenza. Namuhla, ubuhle be-salon banikeza izinsizakusebenza eziningi ezihlose ukubuyisela isakhiwo sezinwele kanye nokululama kwazo. Ake sixoxe ngezinqubo ezidume kakhulu zakwa-salon.
Kuze kube sekugcineni kwezinwele ungaqhubeki, sebenzisa izinwele ezishisayo. I-master isebenzisa isikebhe esishisayo - izinga lokushisa lensimbi lizinqunywe ngabanye ngokusebenzisa uhlelo lwekhompyutha. Indawo ehlanganisiwe ye-cut is uphawu, ukuze izinwele zigcine izinto eziwusizo futhi azihlukanisi. Ngemuva kwezinqubo eziningana, ubukhulu bezinwele ezikude nobude buba bufanayo.
Inkinga yezintambo ezinamathele nezangena zizoxazululwa ngokuphatha izinwele ngomlilo. Inqubo ibonisa ukuthi izinga lokushisa libhekene nezindwangu ezandulele ukuphathwa ngokuthinta ukwelashwa.
Inkosi yenza ukuhlunga kwekhanda, igubha isikhumba nezinwele ngekeratini nokubunjwa kwamaprotheni, ezicebile ezintweni ezisebenzayo namavithamini. Khona-ke ama-curls ayashiswa ngelangabi elivela eboyeni obunwe utshwala. Ukushisa kwe-exposure enjalo akuphakeme kakhulu, ngakho-ke inqubo iphephile ngangokunokwenzeka.
Ngenxa yokufudumala, izakhi zithinteka ngokuqinile ezintanyeni, kanti enye isakhiwo sisebenza kuma-curls, "awathambisa". Ngenxa yalokho, izinwele aziqhekeki, azidideki, zibukeka zikhanya futhi ziluhlaza. Impendulo kuphela ukuthi izinwele kufanele ziphathwe ngomlilo njalo ezinyangeni ezintathu kuya kwezingu-4.
Ukwelashwa kwezinwele nge-nitrogen egazini kubangela ukugxilwa okubukhali kwemithambo yegazi, kulandelwa ukwanda kwawo. Ukwehla kwegazi kuya emaqanda ezinwele kuqina kakhulu, umsoco wabo uvamile, futhi izinwele ziyeka ukuphuma.
Le nqubo i-massage ene-cotton swab efakwe ku-nitrogen egazini. I-Master igubha lesi sidakamizwa ngokunyakaza okusheshayo imizuzu engu-10 kuya kwangu-20.
Okungcono, le ukwelashwa kufanelekile kulabo abanezinwele ezingavamile, abajwayele ukulahlekelwa.
Ngesithuthwane, i-migraine engapheli nomfutho wegazi ophezulu kusuka enkambisweni, kubalulekile ukuphawula.
Ukwelashwa kwama-ampoule wezinwele
Izindlela eziphumelela kakhulu zokubuyisela izintambo ezinomile nezinezinwele zivulekile. Zingaqukatha izinto ezihlukahlukene. Ngokuvamile ku-ampoules ukugxila ngamaminerali, amavithamini, amafutha abalulekile kanye nezitshalo zemithi yokwelapha. Ngenxa yokuhlushwa okukhulu kwezingxenye, ama-ampoules anika umphumela omkhulu.
Isidakamizwa sisetshenziselwa izinwele ezihlanjululwe kahle, ukuxubha esikhumbeni. Cishe konke kugxila kufanele kushiywe kuze kufike ukugeza okulandelayo kwekhanda.
Ukwelashwa okunjalo kwezinwele kusiza ngemuva kokusakazwa kwamakhemikhali, ukucaciswa, i-melirovanija, ukubuyela ekukhiyeni ivolumu yangaphambili nokukhanya.
Ubuchwepheshe be-ozone therapy buyasetshenziswa kakhulu emithi yokwenza ubuhle. Ukunakekelwa kwezinwele endaweni salon ngosizo lwayo kwenziwa ngokusetshenziswa kwesikhumba somxube we-ozone-oxygen. Leli khambi libuyisela ukuphefumula kwezicubu, kuthuthukisa umzimba, ukulethwa kwe-oxygen kanye nokudla kwamangqamuzana.
Le nqubo inomthelela we-antifungal futhi olwa nokuvuvukala, evimbela ukulahleka kwezinwele.
Ukwelashwa kwezinwele ezimpunga
Ukulwa nama-salon wezinwele ezimhlophe kunikezela i-Poly Re-Nature Creme, ebuyisela umbala wemvelo kunwele. Ngaphansi komthelela we-oksijeni, lo muthi udala i-pigment engenakunyakaziswa egcwalisa i-voids. Ukubunjwa kwekhilimu akubandakanyi ama-oxidants, ngoba akulimazi ukukhiya.
Njengesidakamizwa ku-salons sebenzisa amapayipi akhethekile wokugubha izinsimbi ezimpunga. Izindlela zinikeza izinwele ezithungayo ezimnandi noma ama-bluish-violet shades. Imibala enjalo ibonakala ngokumelana okubuthakathaka kunalokho.
Indlela yokubuyisela izinwele ngemva kokukhanyisa?
Izandiso zezinwele ze-Ribbon - konke mayelana nenqubo ethandwayo
Mask for izinwele nge amavithamini
Kungani abesifazane behlekelwa izinwele zabo?
Izitayela zezinwele zezinwele ezinde
Izitayela zezinwele ngakwesokunene
Amakhambi omphakathi wezinwele zokukhula
Isitayela esihle ngezinwele eziphakathi
Isikwele esibekwe izinwele ezinde
U-Wax Strips ebusweni
Ijusi le-Aloe ngezinwele
Iresiphi yamadombolo angenziwe
Ukunakekela izicathulo zesikhumba
Ukusajingijolo ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuchithwa kwama-gallstones ngaphandle kokuhlinzwa
I-window sills yenziwe ngamatshe angokwemvelo
I-Sunberry - ekhula
Iwayini elingelona utshwala oludakayo
I-pillow yamadokheheat husks
Ama-boilers asetshenziswa isikhathi eside ngokushisa ngendlu
Amatafula angaphansi kombhede
Imithi ye-Vascular yokuthuthukisa ukujikeleza kwegazi kobuchopho
Ukuziphatha komuntu othandekayo othandweni
Ukwelashwa kwe-herpes ezindebeni ngosuku olulodwa
Ama-shrimps othosiwe ku-sauce soy
U-Val Kilmer walahleka obala ngeminye imizwa yomdlavuza womphimbo
I-air conditioner yangaphandle yendlu ngaphandle kwemoya yomoya
Amaphiko e-honey-soy sauce kuhhavini - zokupheka ezingu-7 zokuqala zokudla okumnandi
I-hypertension yesilinganiso sesi-2
Umbala waseBordeaux ngaphakathi
I-Lenten amazambane ama-casserole